Obbo Leencoo Lataa: ‘‘Sababa dullumaan dura-aantummaa gadhiisuu nan fedha’’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Leencoo Lataa: ‘‘Sababa dullumaan dura-aantummaa gadhiisuu nan fedha’’
Obbo Leencoo Lataa: ‘‘Sababa dullumaan dura-aantummaa gadhiisuu nan fedha’’
Dura taa’aa Adda Dimookiraatawaa Oromoo, Obbo Leencoo Lataa
(bbc) -Dura taa’aan Adda Dimookiraatawaa Oromoofi qondaallii duraanii ABO Obbo Leencoo Lataa dura-aantummaa dhaaba isaanii irraa akka ka’u fedhan himan.
Turtii BBC waliin taasisaniin waraqaa qorannoo dhiheessuuf jedhaniifi gaaffiiwwan muraasa biroof deebii kennaniiru.
Turtii nama siyaasa Oromoo gameessa, Obbo Leencoo Lataa waliin taasisne dubbisaa.
Obbo Leencoo Lataa: ”Hanga ammaa dhaaba adda taane jirra’
”Lafa Baddannoo jedhamu dhaqeetu hinbeeku”
”Akka jaarsa tokkootti warra dardara gorsina”
Siyaasa itti dhiisuuf jettuu?
Obbo Leencoo: Lakki siyaasa keessaa hinbahu. Yoo dhaabni kiyya eeyyee jedhe hogganummaa gad-lakkisuu nan barbaada. Hojii polotikaa hamman gaafa du’utti dhiisuu hin danda’u. Gaafatamummaa qofa gadhiisuu barbaada. Garuu, murtiin kan dhaabaati.
Dura aantummaa irraa nan ka’a jettan. Gaaffii kana dhaaba keessanif dhiheessitanittuu?
Obbo Leencoo: Eeyyee. Amma walgahiitu ta’a. Walgahi sana irratti murtiin godhama jedheen eega.
Yeroo dhihootti raawwataa?
Obbo Leencoo: Eeyyee
Maaliif garuu dura-aantummaa irraa ka’u feetan?
Obbo Leencoo: Dulluma. Dhimmi biraa tokkolleen hinjiru.
Lammummaa biyya biraa waan qabdanif mitii?
Obbo Leencoo: Lakki sana yoon barbaade boru iftaan galchuu nan danda’a waan lammummaa alagaa sana. Kuni dhibdee biraa hinqabu.
Isin lammuummaa biyya kam qabdu?
Obbo Leencoo: Noorway.
Hoggantummaa irraa ka’uf fedhuun keessan hoggantoota paartii biroof ergaa dabarsu qabaa?
Obbo Leencoo: Yoo irraa waa baran dhimma isaaniiti. Ani isaaniif jedhee miti.
Yoo umuriillee dhiifne, namoonni waggaa dheeraaf dhaabbilee mormituu hogganan ni jiru. Isaan kanaaf ergaan dabarsuu heddan ni jiraa?
Obbo Leencoo: Keessumaa ABO keessa waggaa 50 kan tajaajilan hunduu osoo hoggantummaa gad-lakkisan gaariidha jedhee nan amana.
Obbo Leencoo: Amma dhaloonni haaraan qabsoo fudhateera. Kanaaf, daandii isaa isaaniif dhiisuu wayya jedhee dhuunfaakootti nan yaada.
Ammaan booda jireenyi keessan eessa ta’a?
Obbo Leencoo: Finfinnee
Amma haala maalirra jirtu? Kanaan dura Ministirri Muummee qorannoo akka dhiheessitan hojii isinitti kennani ture?
Obbo Leencoo: Isa irratti hundaa’uudhaan boriifi iftaan konfiransii nama dhibba lama hirmaachisu walitti qabaa jirra. Isa irrattin waraqaa dhiheessa.
Qorannoon suni waa’ee maaliiti?
Obbo Leencoo: ‘Reform or Revolution.’ Biyyi kuni rifoormii hinbeeku rivolishinii (warraaqsa) malee. Kanaaf, amma dhama’iinsa guddaatu jira. Nuti rifoormii dhumti kuni itti fufuu qabaa yaada kanaan dura warraaqsa jennuu malee sana yoo dhiifne ta’a kan jedhu ta’a gorsi keenya.
Malee siyaasa keessaa bahuuf yaada hin qabdanii?
Obbo Leencoo: Siyaasa keessaa akkamittan baha. Jireenyi guutuun siyaasa. Hogganummaan gadhiisa malee, polotikaa danda’ee hin dhiisu.
Jalqaba sababni itti siyaasa seentanif galma gaheera jettanii yaadduu?
Obbo Leencoo: Hamma inni galma gahutti hogganuun qabaa? Lakki! Bilisummaan galma hingahu. Qabsoo isa tokkorraa kabiraatti, cunqursaa polotikaa keessaa yeroo baatu hiyyummaa keessaa baasuu irratti hojjetta. Dheeraadha inni. Jireenya kootti hin dhumata jedhee hin eegu.
Erga dura-aantummaa dhaaba keessan irraa kaatanii booda maal hojjechuu yaaddan?
Obbo Leencoo: Hojii jaarsaan hojjedhakaa ammaan booda. Naman gorsa, yaadan maddisiisa, namaa waliin walqunnama. Akka yeroo hogganaa ture wanta na dhorku hinjiru.
Erga biyya galtanii booda Dambi Dolloo dhaqxanii beektuu?
Obbo Leencoo: Dambii Dolloo hin dhaqne hanga ammaa. Nan dhaqa gaafa Rabbi jedhe.
Dhaabni keessan boordii filannoo jala akka galmaa’u akka hojjetaa jirtan himtanii turtan. Isa milkooftanii?
Obbo Leencoo: Dhaaba kana maal akka goonu gidduu kana koreen gidduu walgahee murteessa. Egeree dhaaba keenyaa irratti murtii gochuudhaaf koreen gidduu torban dhufu walgaha.
OMN: Marii Waltajjii Mandii (Sad. 23, 2018)
Muummichi Ministeeraa Abiy Ahimed Kibxata Hoogganoota paartilee Mormituu Waliin Wal Arguuf Jiru